आन्दोलनरत चिकित्सक भन्छन्, ‘दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सम्झौता भयो, हाम्रो आन्दोलन जारी छ’ – Health Post Nepal
२०७७ जेठ २२ गते १३:०२
नेपाल मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूले एकलौटी तरिकाले सहमति भएको भन्दै आन्दोलन यथावत राख्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुधबार भएको सम्झौतामा आन्दोलनरत पक्षलाई समावेश नगरी एकलौटी सहमति भएकाले आन्दोलन स्थगित नहुने आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
जेठ १४ गते सोही अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि हातपात गरेका थिए।
दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नवौं दिनदेखि मेडिकल कलेजका चिकित्सक तथा अन्य अस्पतालका रेजिडेन्ड चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन्।
बुधबार राति भएको सम्झौतामा नेसनल रेसिडेन्ड डक्टर्स एसोसिएसन, रेसिडेन्ड एसोसिएसन अफ काठमाडौं युनिभर्सिटीको तर्फबाट डा. तोसिमा कार्की, रेसिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्सको तर्फबाट डा. प्रकाश भट्टराई, जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीको तर्फबाट डा. कविराज पौडेल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट डा. कालुसिंह खत्रीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। ५ बुँदामा सहमति गरिएको थियो।
सम्झौताअनुसार अस्पतालको सिसिटिभी फुटेज नष्ट गर्ने वा प्रमाण मेट्न प्रयास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि तीन दिनभित्र पहल गर्ने, दोषी पहिचान गरी तीनभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सक र अन्य सरोकारवालासमेत सहभागितामा ७ दिनभित्र समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाइने, जेल विथ आउट बेलका लागि पहल गर्ने लगायत छन्।
पहिलो र दोस्रो बुँदामा रहेको सम्झौताप्रति आन्दोलनरत चिकित्सकको असहमति रहेको छ। त्यसमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही नहुने गरी प्रस्ट रुपमा अगाडि नआएको हुँदा सम्झौता मान्य नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
उक्त सम्झौताले पीडित चिकित्सकको मागलाई सम्बोधन गर्ने खालको स्पष्ट धारणा भएको र राजनीतिक संरचनाको आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र आन्दोलन तुहाउने पपञ्च रचिएको आन्दोलनरत चिकित्सक गुन्जन खड्का बताउँछन्।
उनले दोषीलाई उम्काउने वातावरण सिर्जना भएको बताए। ‘यो सम्झौता मान्य हुँदैन भनेर हामी ६ बजे नै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निस्किएका थियौं,’ उनले हेल्थपोस्टसँगको कुराकानीमा भने, ‘एकलौटी पूर्ण तरिकाले साथीहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएछ।’
दोषी पहिचान भइसकेको अवस्थामा पनि दोषी परिचालन गर्ने तथा कानुनी दायरामा ल्याउन पहल नभएको उनको भनाइ छ।
नेपाल मेडिकल कलेजको मुद्दा भएका अरु गरेको निर्णय मान्य नहुने डा. खड्काले बताए। ‘यो मुद्दा विशुद्ध नेपाल मेडिकल कलेजको हो। बाहिर अन्य अस्पतालबाट यो अभियान सुरु भएको होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुद्दामा हाम्रो हक हुनुपर्ने हो तर हामीलाई नै बेवास्था गरी निर्णय गरियो।’
दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरा ल्याउनुपर्ने आन्दोलनरत चिकित्सकको माग छ।
सरकारले तीन दिनको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता गरेसँगै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको डा. तोसिमा कार्कीले बताइन्। ‘हामीले समग्र चिकित्सकको मुद्दा केन्द्रित गरेर जेल विथ आउट बेलको कुरा अगाडि सारेका छौं,’ डा. कार्कीले भनिन्, ‘सरकारले केही दिनमा सबै मुद्दालाई समस्या हल गर्ने समयसीमा दिएको छ। केही समय बाटो हेरौं।’
सरकारले दिएको समयसीमामा काम नभए देशव्यापी आन्दोलन जारी राख्ने कार्कीको भनाइ छ।
नेसनल रेसिडेन्ड डक्टर्स एसोसिएसन, रेसिडेन्ड एसोसिएसन अफ काठमाडौं युनिभर्सिटीको तर्फबाट डा. तोसिमा कार्की, रेसिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्सको तर्फबाट डा. प्रकाश भट्टराई, जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीको तर्फबाट डा. कविराज पौडेल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट डा. कालुसिंह खत्रीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।